UN iyo AU oo isku khilaafsan qorshe lagu xirayo wadada garoonka diyaaradaha Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa saraakiil ka socotay Qaramada Midoobay waxa ay ku soo bandhigeen shir ay ka soo qeyb galeen saraakiil ka socotay AMISOM iyo Dowladda Soomaaliya qorshaha ah in la xiro wadada tagta garoonka diyaaradaha, si loogaga hortago in weeraro is-qarxin ah ay ku qaadaan Al-Shabaab xarumaha UN-ka.
“Waxaad bixisaan lacag (UN) annagana (AMISOM) waxaan bixinaa dhiig oo labadaba ah kuwo la isla barbardhigi karo, balse qorshahan ma aha mid aan soo dhoweyneyno.”ayuu yiri Col. Osman Subagle, taliyaha cusub ee ciidamada Midowga Afrika isagoo ka hadlayay kulankaas sida ay sheegeen ilo lagu kalsoon yahay oo ka qeybgalay shirka.
Qorshahan la isku afgaran la’ yahay ayaa Qaramada Midoobay waxaay ku doonaysaa in ay basas ugaga soo qaado dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha, laguna geeyo isgoyska Km4 ama Lambar4, wadadana la xiro.
Hase yeeshee, kulanka ayaa madaxdii ka socotay Midowga Afrika waxaay ku taliyeen in wadada la dhigo ciidamo dheeri ah, halkii laga xiri lahaa, balse Qaramada Midoobay ayaa dhinaceeda ku gacan seyrtey fikirkaas.
Madaxdii ka socotay dowladda Soomaaliya ee ka qeyb gashay kulankan ayaa dhinacooda waxaa ay ka taxadareen in ay si toos ah dhinac ula saftaan, balse waxay ku tilmaameen fikirka Midowga Afrika inuu yahay mid tixgelin mudan.
Kulankan oo ka dhacay xarunta Midowga Afrika ee magaalada Muqdisho Talaadadii la soo dhaafay ayaa ugu dambeyntii saraakiishii ka socotay Qaramada Midoobay waxay isaga baxeen shirka, taasoo muujinaysay in ay ka careysan yihiin diidmada ay Midowga Afrika la yimaadeen.
Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay la beegsanayaan xarumaha dowladda, hotelada, xarumaha hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa Midowga Afrika, iyadoo ay socoto haatan diyaargarowgii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya taasoo la qorsheeyay inay dhacdo 30-ka October 2016.